The Nokia D1C ga-akụ ahịa ahụ nwere nhazi abụọ dị iche iche | Akụkọ akụrụngwa
Anyi na-ekwu okwu banyere Nokia. Daybọchị a gosipụtara ụdị Nokia ọhụrụ, maka ndokwa maka Mobile World Congress na-esote afọ, anyị ga-ewepụ obi abụọ na n'ikpeazụ anyị ga-akwụsị ikwu okwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ìsì na asịrị metụtara ụlọ ọrụ ahụ nke dugara ahịa maka ekwentị ndị na-abụghị smart ruo ọtụtụ afọ. Ọtụtụ ihe a na-ekwu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya banyere ihe ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmalite. Asịrị ndị kachasị ọhụrụ na-arụtụ aka na Nokia D1C, nke a na-akpọghị ya (ọ bụghị aha ahia ma ọlị), see uzo di iche iche.
Nke a nwere ike igosi na ụlọ ọrụ Finnish nwere ike izu ire dị iche iche nke otu ekwentị na mba dị iche iche, ihe na-abụghị ihe ọhụụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme, nke nwere ike igosi na Nokia chọrọ ịlaghachi n'ahịa ahụ site n'ọnụ ụzọ buru ibu, ihe nwere ike ghara ịrụ ọrụ ebe ọ bụ na nnukwu ọnụ ụzọ nwere ike ịghọ mgbidi nkume na ịfụ ọkụ siri ike karịa ka ha tụrụ anya ya. Blackberry bụ ihe atụ nke a.
Otu n'ime ụdị D1c dị iche iche ga-achịkwa Snapdragon 430, ọ ga-ejikwa ya 2 GB nke Ram, ọ ga-enwe 5-anụ ọhịa Full HD ihuenyo na a n'azụ igwefoto na mkpebi nke 13 mpx. Ọ bụ ezie na ụdị nke ọzọ ga-achịkwa ya 3 GB nke Ram, ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na mkpebi HD zuru ezu na maka foto ọ ga - agbakwunye ihe mmetụta 16 mpx. Banyere nhazi nke ga - ejikwa ụdị kachasị ike, ekwesịrị iche na ọ gaghị abụ Snapdragon 430, kama ọ bụ nke ka elu, mana anyị enweghị ozi gbasara ya.
Ihe doro anya bụ na ịbịaru n'ahịa n'oge nke mbụ nke afọ na-esote, gam akporo 7.0 Nougat ga-ejikwa ọnụ ndị a. Ọ bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọghị na oge mgbanwe mbụ, njedebe gị ga-ada n'ahịa, ọ dịkarịa ala maka ọtụtụ nde ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nokia D1C ga - akụ ahịa ahụ nwere nhazi abụọ dị iche iche
Egwu Groove sitere na Microsoft na-enye anyị ọnwa 4 n'efu